U-Luisa Picarretta-Kwizigwebo - Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Uxela ULuisa Piccarreta :
Ntombi yam, yonke into oyibonileyo [izohlwayo] iya kuhlambulula kwaye ilungiselele abantu. Iingxwabangxwaba ziya kusebenza ukuhlengahlengisa, kunye nokonakaliswa ukwakha izinto ezintle ngakumbi. Ukuba isakhiwo esibhidlikayo asidilwanga, entsha kunye nenhle ngakumbi ayiyi kwenziwa phezu kwala manxuwa. Ndiza kuvuselela yonke into ngenjongo yokufezekiswa kwentando yam kaThixo. ... xa simisela, konke kwenziwa; Kuthi, kwanele ukumisela umthetho ukuze kufezekiswe oko Sikufunayo. Kungenxa yoko le nto kubonakala ngathi kunzima kuwe konke kuya kwenziwa lula ngaMandla ethu. (Epreli 30)th, 1928)
Akukho nanye kuzo zoQweqwe; bafunda umhlaba ukuBuya koBukumkani!
Izigwebo zinzima kakhulu kuYesu kunaye nakubani na; kuba ukohlwaya- okanye ukuvumela ukohlwaywa -Oyahlwaya owam umzimba. Unokukunyamezela kuphela oku kuba uyakubona okuza kuza emhlabeni emva koNyulo. U-Yesu uthi kuLisa:
Kwaye ukuba kwakungekho kuthi isiQinisekiso sokuba intando yethu iyakulawula isidalwa, ukuze sibenako ukuBeka uBomi kuye, uThando lwethu luya kuyitshisa indalo ngokupheleleyo, kwaye iyakulunciphisa lube lulutho; kwaye ukuba iyakuxhasa kwaye iyanyamezelana kakhulu, kungenxa yokuba Sibona amaxesha ezayo, injongo yethu iqondwe. (Meyi 30, 1932)
Ngelizwi: Ukohlwaywa ayisi kohlwaya; zilungiselela kwaye, eneneni, zibalulekile.
Kutheni le nto isalvific? Kuba uninzi lwemiphefumlo iya kubuyela ngokwenene kuThixo ngamaxesha okulingwa. UThixo ubathanda kakhulu abantwana baKhe kangangokuba uyakuzama yonke enye into ngaphambi kokuba bangene kwiZohlwayo - kodwa, ekugqibeleni, ukohlwaywa okwethutyana kubhetele kunokuba kugwetywa okungapheliyo. Kwindinyana esele icatshulwe ngaphambili, kwakhona uxelela uLisa:
“Ntombi yam, isibindi, yonke into izakusebenzela uloyiso lwentando yam. Ukuba ndiyabetha, kungenxa yokuba ndifuna ukuphilisa. Uthando lwam lukhulu kakhulu, kangangokuba xa ndingenakoyisa ngothando nangeeGrace, ndifuna ukoyisa ngendlela yokoyika nokoyika. Ubuthathaka bomntu buninzi kangangokuba amaxesha amaninzi akakhathali ngeeGrace zam, usisithulu kwilizwi lam, uhleka Uthando lwam. Kodwa kwanele ukuchukumisa ulusu lwakhe, ukususa izinto eziyimfuneko kubomi bendalo, ukuba kuyathoba ikratshi lakhe. Uziva ehlazekile kangangokuba uzenza irakh, kwaye ndenza le ndiyifunayo ngaye. Ingakumbi xa bengenawo umyolelo ongenabuntu nonguntamo-lukhuni, isohlwayo esinye sanele-ukuzibona sele usecaleni kwengcwaba-ukuba abuyele kum ezandleni zam. ” (NgoJuni 6, 1935)
Uthixo Luthando. Ke ngoko, izohlwayo zikaThixo - nokuba zithanda ngqo okanye zivumela kuphela - zikwizenzo zothando. Masingayilibali loo nto, kwaye ngoku masiqhubeke siqwalasele ngakumbi iinkcukacha.
[Phambi kokuchaza ngakumbi, nangona kunjalo, kufuneka ndiqaphele ngokufutshane ukuba izityhilelo zikaLuisa azenzelwe ukuba ibe yimephu yendlela eneenkcukacha ngazo zonke izinto ezizayo emhlabeni. Zininzi izinto ezibalulekileyo ezizayo kungekudala kulomhlaba, ngokolwazi lwam, ezingathethwanga kwimibhalo kaLuisa (umzekelo, Isilumkiso, Iintsuku ezintathu zobumnyama, uMchasi-Kristu); ngenxa yoko, ukubaluleka kokuqhubeka nokumamela zonke iifowuni zeZulu, kwaye ungalindeli ukuba yonke into ibekwe ngokucacileyo kwizityhilelo zikaLuisa yedwa.]
Omnye umba woNyangeo kukuvukela kwendalo kwezinto ngokwazo.
… Izinto zidalwe ziziva zihloniphiwe xa zikhonza isidalwa esiphilayo nguloo Ntu ubumba ubomi babo. Kwelinye icala, umyolelo wam uthatha isimo sengqondo sokudakumba kwezi zinto zidaliweyo zifanayo xa kufuneka usebenze umntu ongazalisekisiyo intando yam. Yiyo loo nto kusenzeka ukuba amaxesha amaninzi izinto zibeke endaweni yomntu, bayambetha, bayambetha--kuba besiya bebakhulu emntwini, njengokuba beqhubeka bangene ngaphakathi kubo loo nto intando kaThixo ababephila kuyo kwasekuqalekeni kwendalo yabo, ngelixa umntu ezantsi ezantsi, kuba akayigcini intando yoMdali wakhe ngaphakathi kwakhe. (Agasti 15, 1925)
Oku kunokuvakala kungaqhelekanga kwabanye, kodwa khumbula ukuba olu asilulo naluphi na uhlobo lomntu oluchaphazela into ethile; UYesu akazange athi kuLuisa ukuba nantoni na eyindalo ngokwayo inobuThixo ngokwayo (akukho kwanto ityhidiweyo kwizityhilelo zikaLuisa) okanye ukuba naliphi na icandelo lezinto ezibonakalayo luluhlobo lomntu onguThixo. Kodwa uphinda axelele uLisa ukuba yonke indalo isebenza njenge isigqubuthelo ngentando yakhe. Kodwa ekubeni, kwindalo yonke ebonakalayo, umntu kuphela unesizathu; ngenxa yoko, ngumntu kuphela onokuthi avukele ukuthanda kukaThixo. Xa umntu esenza njalo-kwaye uluntu lwenze okungaphezulu namhlanje kunanini na kwimbali - izinto ngokwazo, ngokwendlela ethile, ziba "ngaphezulu" emntwini, ekubeni bengakhange bavukele intando kaThixo; ke, “bazifumene” ngaphezulu komntu, ababakhoyo ngenxa yokumkhonza, 'batyekela' ukohlwaya umntu. Olu lulwimi oluyimfihlakalo ngokwenene, kodwa alunakubhalwa, nokuba. NoYesu uxelela uLisa:
Esi sizathu sokuba intando yam yeTixo ibe ngathi ijongeke ngaphakathi kwezinto, ukubona ukuba bayalahlwa ukuba bafumane ukulunga kokusebenza kwayo okuqhubekayo; kwaye ekuZiboneni ukuba iyaliwe, idiniwe, Iyabaxhobisela izinto. Ke ngoko, ukohlwaywa okungalindelekanga kunye nezinto ezintsha ezenzekayo ziza kwenzeka; Umhlaba, kunye nokunyikima kwawo okuqhubekayo, ulumkisa umntu ukuba abuyele ezingqondweni, kungenjalo uya kuzikalela phantsi kwamanqwanakhe ngenxa yokuba engasakwazi ukumxhasa. Ububi obuseza kwenzeka bukhulu kakhulu (Novemba 24, 1930)
Kuyavunywa, asinakukwazi ukwenza ngathi singakuqonda ngokupheleleyo okuza kubanjwa ngalo mzuzu ngalo mzuzu, ngaphambi kokuba sibe namava. Kuba kuya kubakho "into entsha." Uninzi lwale nto, nangona kunjalo, isezandleni zethu ukuba ubuncinci baziswe; Ke ngoko, yimizekelo embalwa yezi zinto ke ngoku esijonge kuzo:
Kubonakala ngathi umntu akasenakuphila kula maxesha alusizi; okwangoku, kubonakala ngathi sisiqalo nje… Ukuba andifumani zinto zam ezonelisayo-ewe, liphelile ilizwe! Izibetho ziya kuphalaza imilambo. Ah, ntombi yam! Ah, ntombi yam! (NgoDisemba 9, 1916)
Kwabonakala ngathi amawaka abantu ayakufa- Uqhushululu, inxenye inyikima, inxenye isemlilweni, inxenye isemanzini. Kwabonakala kum ukuba ezi zityholo zingaphambi kweemfazwe ezisondelayo. (Meyi 6, 1906)
Phantse zonke izizwe zihlala zixhomekeke kumatyala; ukuba awenzi amatyala, akanakuphila. Kwaye ngaphandle koku bhiyozela, abazihlanguli, kwaye baceba imfazwe, benza iindleko ezinkulu. Ngaba ngokwakho awububoni ubumfama obukhulu kunye nobuhlanya awele kulo? Kwaye wena, mntwana omncinci, ungathanda ukuba uBulungisa bam bungabakhubekisi, kwaye bazonwabise ngezinto zokwexeshana. Ke, uya kufuna ukuba babe ziimfama ngakumbi nangakumbi. (Meyi 26, 1927)
Ngokucacileyo sisibetho esikhulu esilungiselela ugqatso lobubi lwezidalwa. Indalo ngokwayo idiniwe bububi obuninzi, kwaye ingafuna ukuziphindezela ngamalungelo oMdali wayo. Zonke izinto zendalo ziya kufuna ukuzibeka ngakuye umntu; ulwandle, umlilo, nomoya, umhlaba, sele uza kuphuma kwimida yabo ukuze wenzakalise kwaye uxabele izizukulwana, ukuze zibagqibe. (Matshi 22, 1924)
Kodwa noqeqesho olo luyimfuneko; oku kuyakusebenza ukulungisa umhlaba ukuze uBukumkani bePhezulu Fiat bube phakathi koluntu. Ke, ubomi obuninzi, obuya kuba ngumqobo kwimbalasane yoBukumkani bam, buza kunyamalala ebusweni bomhlaba… (Septemba 12, 1926)
Ntombi yam, andikhathalelanga izixeko, izinto ezinkulu zomhlaba — ndixhalabele imiphefumlo. Izixeko, iicawe kunye nezinye izinto, emva kokuba zitshatyalalisiwe, zinokwakhiwa kwakhona. Khange ndiyitshabalalise yonke into ngoNogumbe? Kwaye ayiphindi yenziwe yonke into kwakhona? Kodwa ukuba imiphefumlo ilahlekile, ingunaphakade — akukho mntu unokuyibuyisela kum. (Novemba 20, 1917)
Ngobukumkani beNtando yam intando yonke into iya kuhlaziywa kwiNdalo; izinto ziya kubuyela kwimeko yazo yasekuqaleni. Kungenxa yesi sizathu le nto ukubethwa kuninzi kuyimfuneko, kwaye kuyakwenzeka-Ngoko ke ukuba ukuLunga kukaThixo kungazibeka kulungelelwano nazo zonke iimpawu zam, ngendlela yokuba, ngokuzilinganisa, Buyeke uBukumkani beNtando yam bube noxolo nolonwabo. Ke, ungamangalisi ukuba into entle kangaka, endiyilungisayo nesifuna ukuyinikezela, yandulelwa zizibetho ezininzi. (Agasti 30, 1928)
Abanye banokuhendelwa ekubeni bathi ezi zibakala zingqongqo 'zibubuvuvu.' Isibhalo ngokwaso siphendula kobu buxoki ngomprofeti uHezekile: "Ukanti ithi ke indlu kaSirayeli, 'Indlela yeNkosi ayilungile.' Iindlela zam azilungelelene, ndlu kaSirayeli. Asizezenu iindlela ezingalunganga? ” (Hezekile 18: 29)
Abantu abaninzi bayamgatya uThixo. Umahluko phakathi kwento ayinikezela emntwini kunye nendlela umntu aphendula ngayo iyinto ecekeceke njengokutshabalalisa kwentliziyo elukhuni. Yimeko elusizi ngakumbi kunaleyo yokuba umfazi ongathembekanga womyeni olungileyo, emva kokumshiya nokwaphula uthando lwayo ngazo zonke iindlela ezijongekayo, yena ngokwakhe ufunwa kuye aze anikezele ngoxolelaniso olupheleleyo ngaphandle “kwendleko” nokuba yintoni na, umphose umnikelo wakhe ebusweni bakhe ngomjelo wokuthuka. Yile nto kanye, eyenziwa ngumntu namhlanje kuThixo.
Simele sikhumbule ukuba uYise wonyana wolahleko akazange aphume ayifumane le yokugqibela aze ayinyanzele ekuziphatheni okubi. Nangona engumfanekiso wothando, lo bawo nangona kunjalo wavumela ukukhohlakala konyana ukuba kuvelise imiphumo yayo engathandekiyo yendalo ebangelwa kukubandezeleka okukhulu, esazi ukuba le ntlungu iya kumzisela unyana ingqondo yakhe.
Ngenxa yokuphendula komntu kwinyathelo likaThixo-apho ebeya kuthi akhethe ukusoyisa eluthandweni-ayikho enye indlela ngaphandle kokuvumela uBhanqo ukuba liqhube ikhosi yabo. Uqeqesho olo, ngokuqinisekileyo, luqinisekisiwe ukwenza umsebenzi. Ayizondlela uThixo afuna ukuba kwenzeke ngayo, kodwa baya kusebenza.
… Kuba le ndlela yokuphila [kwintando kaThixo] yayikukuba zizidalwa zonke-le yayiyinjongo yethu, kodwa kukukrakra kwethu okuphezulu siyayibona loo nto phantse zonke baphile kwinqanaba elisezantsi lokuthanda kwabo… (Oktobha 30, 1932)
[Luisa uqaphela:] Ukanti, unobangela [woLuleko] sisono kuphela, kwaye umntu akafuni ukunikezela; kuyabonakala ukuba umntu uzibeke nxamnye noThixo, kwaye UThixo uya kuphakamisela izinto umntu, amanzi, umlilo, umoya kunye nezinye izinto ezininzi. eya kubangela ukuba abaninzi bafe. Iyothuswa yintoni, yoyika! Ndaziva ngathi ndiyafa kukubona zonke ezi zinto zilusizi; Ndingathanda ukubandezeleka nantoni na ukuze ndicenge iNkosi. (Epreli 17, 1906)
… Fiji ePhakamileyo ifuna ukuphuma. Idiniwe, kwaye nangayiphi na indleko Ifuna ukuphuma kule ntlungu ihlala ixesha elide; kwaye ukuba uva malunga nezohlwayo, ze izixeko zidilikile, ye intshabalalo, le nto iyenye ngaphandle kokuqina okumandla kobuhlungu bayo. Ayikwazanga kuyithwala ixesha elide, Ufuna ukwenza uluntu ukuba luve imeko yalo ebuhlungu kunye nendlela ebhala ngayo ngokuqinileyo ngaphakathi kubo, ngaphandle kwakhe nabani na onemfesane ngenxa yaKho. Kwaye ukusebenzisa ubundlobongela, kunye nokugoba kwayo, Ifuna ukuba bazive ukuba Ikho kubo, kodwa ayifuni ukuba sezintlungwini-ifuna inkululeko, ubukhosi; Ifuna ukwenza ubomi bayo kubo. Yintoni ingxaki kuluntu, ntombi yam, kuba intando yam ayilawuli! Imiphefumlo yabo injengezindlu ezingenamyalelo, yonke into isemazantsi; Ukubetha kuyothusa — ngaphezulu kunoko komthi obambekayo. Kwaye intando yam, kunye nobukhulu bayo, obunokuthi bunganikwa yona ukuba bushenxise kwentliziyo enye yesidalwa, iyagungqa phakathi kobubi obuninzi. Kwaye oku kuyenzeka ngokulandelelana kwezinto zonke… Yiyo loo nto ke le nto ifuna ukugqobhoza iibhanki zayo ngokujijisana kwayo, ukuze, ukuba abafuni ukuyazi baYifumane ngeendlela zoThando, ukuze bayazi ngeendlela zoBulungisa. Ndidiniwe kukukhathazeka kangangeenkulungwane, intando yam iyafuna ukuphuma, kwaye ke ngoko ilungiselela iindlela ezimbini: indlela yoloyiso, olu lwazi lwayo, ukukhuthaza kwayo nako konke okuhle uBukumkani bePhezukonke Fihla obuza kuyibuyisela; nendlela yeBulungisa, kwabo bangafuni kuyazi njengoNqoba. Kuxhomekeke kwizidalwa ukukhetha indlela abafuna ukuyifumana ngayo. (Novemba 19, 1926.)
Esi sicatshulwa sigqibeleleyo apha ngasentla sesona sibalulekileyo ekufuneka sikhunjulwe kuba isixelela ngokucacileyo ukuba ubungqingqwa boMthendeleko uya kuhambelana nokusilela kwemibono yeNtando kaThixo phakathi kwabantu. U-Yesu uxelela u-Luisa ukuba nayiphi na imozulu ye-Divine Will inokulungisa indlela, okanye imiThango inako. Ngaba uyafuna, ke, ukunciphisa umngcipheko? Ngaba uyafuna ukuwusindisa lo mhlaba ubuncinci ezinye zembali ezingekenzeki ngaphambili ezazisenokubhukuqa? Yiba nguVangeli weFiat wesithathu. Phendula iminxeba yezulu. Thandaza kwiRosari. Rhoqo ziiSakramente. Vakalisa i-Nceba kaThixo. Yenza imisebenzi yeNceba. Umbingelelo. Zingcwalise. Ngaphezulu kwako konke, phila ngokwentando kaThixo, kwaye noYesu ngokwakhe akasayi kuba nakho ukumelana nezibongozo zakho malunga nokuncitshiswa kohlaselo.
Side sifikelele kwinqanaba lokumnika ilungelo lokuGweba kunye nathi, kwaye ukuba siyabona ukuba uyahlupheka kuba umoni uphantsi kwesigwebo esiqatha, ukuthomalalisa iintlungu zakhe Sinciphisa ukohlwaywa kwethu okufanelekileyo. Usenza ukuba sincamise ukuxolelwa, kwaye simenze onwabe Sithi kuye: 'Ntombi ndini, ulungile. Ungabethu kwaye ungowabo. Uziva ngaphakathi kwakho iibhondi zosapho lomntu, ke ngoko uya kufuna ukuba Sixolele wonke umntu. Siza kwenza kangangoko sinako ukukukholisa, ngaphandle kokuba uyakudelela okanye angafuni ukuxolelwa kwethu. ' Esi sidalwa kwintando yethu ngu-Estere omtsha ofuna ukuhlangula abantu bakowabo. (Oktobha 30, 1938)
Ke siyakwazi ukunciphisa umngcipheko - oko kukuthi, ukunciphisa ubukhulu, umda, kunye nexesha-lokuphendula kwethu. Kodwa bayeza nangona kunjalo. Ke kuseza kujongwa ukuba singazisebenzisa njani, kuba kufuneka sikhumbule ukuba akukho nto inokwenzeka ngaphandle kokuthanda kukaThixo. Khumbula into esiyiqwalasile apha: UNGAYENZI IMFAZWE. Umphefumlo kwisisa sikaThixo mawungoyiki ukohlwaywa, kuba nakokona kubi kakhulu, ubasondela njengomntu onomdaka emzimbeni wakhe esondela kwishawa. U-Yesu uthi kuLisa:
Isibindi, ntombi yam-isibindi yimiphefumlo ezimisele ukwenza okuhle. Azichaphazeleki phantsi kwaso nasiphi na isaqhwithi; Kwaye xa besiva ukugquma kweendudumo kunye nemibane ukuya kwinqanaba lokungcangcazela, kwaye ihlale phantsi kwemvula ethululayo ebathulula phezu kwabo, basebenzisa amanzi ukuba bahlanjwe baphume bahle ngakumbi; kwaye Ungasinanzanga isiphango, zihlala zizimisele ngakumbi kwaye zinesibindi ngokungasuki kokulungileyo abaqalileyo. Ukudimazeka yimiphefumlo engekho mthethweni, engafikiyo ekufezekiseni okuhle. Isibindi sibeka indlela, isibindi sibeka yonke imbandezelo, inkalipho isonka sokomelela, inkalipho isenjenjeya ukulwa nemfazwe. (Epreli 16, 1931)
Enjani yona imfundiso entle! Ngaphandle kokunikezela kulo naluphi na uhlobo lokuqhwalela ngokubhekisele kuChato oluzayo, singabalindela ngohlobo lonwabo olungcwele; kuba singazisebenzisa, njengoko uYesu esicela apha, ukuze sizihlambulule kwinto esiyaziyo ukuba ingcolile kodwa esingakhange siyifumane amandla okususa. Ndabelana ngeengcebiso ezimbalwa zendlela, mhlawumbi, esinokuthi silisebenzise ngayo eli cebiso xa ithuba liziveza:
Xa okuqhubayo kucaca ngakumbi, jonga kwinto ezayo nethemba ehamba kunye nolwazi lokuba, ngaphandle kwengxaki yakho, akukho nto ngaphandle kothando olugqibeleleyo oluvela ezandleni zikaThixo. Ukuba uyakuvumela ukuba ubandezeleke, kungenxa yokuba ukubandezeleka okukhethekileyo yeyona ntsikelelo inkulu anokuyicinga kuwe ngalo mzuzu. Kule, awusoze udane. Unokoyiswa. Ungathi kuDavide, "Andikoyiki iindaba ezimbi" (Iindumiso 112). Ukufika kuloo ndawo ayifuni ukunyuka intaba ende nenzima. Ifuna ukuba, nangalo mzuzu, uthi ngentliziyo yakho yonke "Yesu, ndiyathemba kuwe."
Ukuba abantu obathandayo basweleka, themba ukuba uThixo uyazi ukuba lixesha elifanelekileyo lokuba bagoduke, kwaye uzobabona kungekudala, xa ixesha lakho lifikile. Kwaye bulela umbulelo ongazenzisiyo kuye ngokuthi ukunike ithuba lokuvalelwa kwizidalwa ukuze unamathele ngakumbi kuMdali wakho, kuye uyakufumana ulonwabo noxolo ngakumbi kunobudlelwane obugqibeleleyo nesigidi sabahlobo kunye namalungu osapho adibeneyo.
Ukuba ulahlekelwe likhaya lakho kunye nayo yonke impahla yakho, bule umbulelo kuThixo ukuba ukubone kufanelekile ukuba uphile ubomi obusikelelekileyo buka-St. Francis'-ukuxhomekeka ngokugqibeleleyo kwiProvidence ngalo mzuzu ngamnye-kwaye ukuninike nobabalo ukuba aphile ngale nto Wayicele le ndodana isisityebi ukuba iphile ngaphandle kwayo, umfana ongazange enikwe lubabalo lokulandela, kuba “wemka enosizi.” (Mat. 19:22)
Ukuba uphoswe kwisisele sentolongo ngenxa yolwaphulo-mthetho ongakhange uluenze, okanye ngesenzo esihle osenzileyo, esijongwa ngobuxoki, kweli lizwe lijijekileyo, ukuba ulwaphulo-mthetho, bulela uThixo akunike Ubomi be-monastic-sisibizo esiphezulu-, kwaye unokuzinikezela ngokupheleleyo emthandazweni.
Ukuba uyabethwa okanye ukhathazwa, nokuba ngumntu okwenzakalisayo okanye ukwimeko nje ebuhlungu kakhulu (nokuba yindlala, ukubhengeza, ukudinwa, ukugula, okanye yintoni onayo) ,bulela uThixo kuba ekuvumela ukuba ubandezeleke ngenxa yakhe , kuYe. Izihlandlo ezinjalo, xa kungekho ndlela yakuziphepha ngaphandle kokona, yeka kuThixo ngokwakhe akhonze njengomlawuli wakho wokomoya, uthatha isigqibo sokuba ufuna isimilo. Kwaye izinto zokuziphatha ezikhethwe nguProvince zihlala zingcono kunezezethu, kwaye zihlala zivelisa ulonwabo olukhulu kwaye zisakha ubuncwane obukhulu emhlabeni nasemazulwini.
Ukuba ukutshutshiswa nangayiphi na indlela kukuchaphazela, vuya ngovuyo olungathethekiyo ngenxa yokuba uthatyathwe njengoyifaneleyo — phakathi kwezigidi zamawaka amaKatolika angakhange aqwalaselwe. “Bandula ke bemka phambi kwebhunga, benemivuyo yokuba kuthiwe bakufanele ukuhlaziswa ngenxa yegama.” - IZe. 5:41. Inye kuphela into yokuba iNkosi yethu ibone ukuba inkulu kakhulu kangangokuba kufuneka ihlale kuyo iphinde ibethe eyokugqibela, ithi, "Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa, kuba ubukumkani bamazulu bobabo. Ninoyolo nina, xa bathe abantu baningcikiva, banitshutshisa, bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka, ngenxa yam. Yibani nemihlali, nigcobe, kuba umvuzoenu mkhulu emazulu, kuba benjenjalo ukubatshutshisa abaprofeti ababekho ngaphambi kwenu. (Mat. 5: 10-12).
U-Yesu waxelela uLuisa ukuba kulula kakhulu ukwahlula into eyinyuliweyo kwabanyuliweyo, njengoko, ngoMhla woMgwebo, umqondiso woNyana woMntu (umnqamlezo) esibhakabhakeni uya kubangela unkwantyo kwangaphambili kunye nochulumacho kamva. Ngoku ke okwangoku, indlela umntu ahlangabezana ngayo neminqamlezo yakhe ebomini ityhila ikamva laphakade. Ke, kuyo yonke into yithi, kuYobhi, "INkosi iyanikela kwaye iNkosi iyasusa. Malibongwe igama leNkosi. (Yobhi 1: 21) Isela elilungileyo kunye nesela elibi bazifumana bekwimeko efanayo. Omnye wadumisa uThixo phakathi kwawo, omnye wamqalekisa. Khetha ngoku oza kuba kuko.
NoYesu uxelele ULuisa Piccarreta :
Ke, iziMvo ezibe zivele zingeyonto ingeyiyo eyokwandulela leyo izayo. Zingaphi izixeko ezitshatyalaliswayo…? Okusesikweni kwam akunakuphinda ndikunyamezele; Intando yam ifuna ukuNqoba, kwaye ndifuna ukuNqoba ngoThando ukuze ndimise uBukumkani bakhe. Kodwa umntu akafuni ukuza kudibana nale Luthando, ke ngoko, kufuneka isebenzise ubulungisa. —Nov. Ngomhla we-16, ngo-1926
"UThixo uya kuwucoca umhlaba ngokusohlwaya, kwaye inxalenye enkulu yesi sizukulwana sangoku iya kutshatyalaliswa", kodwa [noYesu] uyangqina oko "Ukohlwaywa akungeni kwaba bantu bafumana isipho esikhulu sokuphila kwintando kaThixo", kaThixo "Bayawakhusela kunye neendawo ahlala kuzo". -Ophawulwa kwisipho sokuphila kwiNtando kaThixo kwiincwadi zikaLuisa Piccarreta, uMfu uJoseph L. Iannuzzi, STD, Ph.D
Ntombi yam, andikhathalelanga izixeko, izinto ezinkulu zomhlaba — ndixhalabele imiphefumlo. Izixeko, iicawe nezinye izinto, emva kokuba zitshatyalalisiwe, zingakhiwa kwakhona. Khange nditshabalalise yonke into ekuNogumbe? Kwaye ayisekho yonke into ephinde yenziwa kwakhona? Kodwa ukuba imiphefumlo ilahlekile, ingonaphakade-akukho mntu unokuyibuyisela kum. —Novemba 20, 1917
Ke ngoko, ukohlwaya okungalindelwanga kunye neziganeko ezitsha sele ziza kwenzeka; umhlaba, kunye nengcangcazela ephantse yaqhubeka, ulumkisa umntu ukuba abuyele ezingqondweni, kungenjalo uya kuzika phantsi kwamanyathelo akhe ngenxa yokuba ayisakwazi ukumxhasa. Ububi obuza kwenzeka buhlungu, kungenjalo ngendingazange ndikunqumamise rhoqo kwimeko yakho yesiqhelo yexhoba… -Novemba 24, 1930
… Ukohlwaya kuyimfuneko; Oku kuyakunceda ekulungiseni umhlaba ukuze uBukumkani beFigat ePhakamileyo bube phakathi kosapho loluntu. Ubomi obuninzi, obuza kuba ngumqobo kwimpumelelo yoBukumkani bam, buya kuthi shwaka ebusweni bomhlaba… -Septemba 12, 1926
Ngobukumkani beNtando yam intando yonke into iya kuhlaziywa kwiNdalo; izinto ziya kubuyela kwimeko yazo yasekuqaleni. Yiyo loo nto uninzi lwezibetho zifuneka, kwaye ziyakwenzeka-ukuze uBulungisa obuKhulu buziMise ngokulinganayo nazo zonke iimpawu zam, ngendlela yokuba, ngokuzilinganisa, buBuyele uBukumkani beNtando yam ngoxolo lwayo kwaye ulonwabo. Ke ngoko, ungothuki ukuba intle kangaka, endiyilungisayo nesifuna ukuyinikezela, yandulelwa zizibetho ezininzi. -August 30, 1928
exhonyiweyo ULuisa Piccarreta, imiyalezo.
← Kutheni Edson Glauber?
I-Pedro Regis - Ukuphazamiseka ku… →